Vaovao - 11 Novambra 2018 stream flo orinasa Canada
Tongasoa tsara ny orinasa Canada Stream Flo hitsidika an'i cepai
Tamin'ny 14:00 alina tamin'ny 11 Novambra 2018, Curtis altmiks, talen'ny fividianana varotra manerantany an'ny Stream Flo Company any Canada, sy Trish Nadeau, mpamatsy vola amin'ny famatsiana, niaraka tamin'i Cai Hui, tale jeneralin'ny orinasa Shanghai, dia nitsidika an'i cepai hanaovana famotorana. Andriamatoa Liang Guihua, filohan'ny cepai, dia niaraka tamim-pitiavana.
Stream Flo Company dia natsangana tamin'ny taona 1969, no mpaninjara solika lehibe indrindra fampitaovana solika ao Canada, ary ny vokatra vokariny dia aondrana any amin'ny firenena maherin'ny 300 eran'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny firoboroboan'ny tsenan-tsolika solika amin'ity taona ity, ny orinasa manerantany an'ny Stream Flo Company dia mivelatra haingana, noho ny filan'ny fampandrosoana, mila maika izy ireo hikaroka mpamatsy valizy sy kojakoja bebe kokoa ao Shina.
Miaraka amin'ny mpitantana jeneralin'ny CEAPI, ny ekipan'ny Stream Flo Company dia nandinika ny fizotry ny famokarana sy ny famokarana vokatra CEPAI avy amin'ny akora, milina marokoroko, fitsaboana hafanana, famaranana, fivorian'ny, fanaraha-maso ny ozinina ary ny fizotran'ny fanamboarana isan-karazany. Nandritra ny fizahana rehetra dia nandinika manokana ny fitsaboana antsipirihany ireo vokatra CEPAI i Trish Nadeau tamin'ny fizotry ny fanamboarana, toy ny fitantanana ny fanarahan-dia sy ny fiarovana ny endrika vokatra sns, ary tena nahafa-po ny valiny.
Ny fizotran'ny fizahana rehetra dia mahafinaritra sy mahafa-po. Ny Stream Flo Company dia mino ny fahaizan'ny famokarana CEPAI sy ny fahaizan'ny rafitra rafitra kalitao. Nilaza i Curtis altmiks nandritra ny fivoriana fa vonona ny hiara-miasa amin'ny CEPAI izy. Ny filoha Mr.Liang koa dia feno fankasitrahana ny ekipan'ny Stream Flo noho izy ireo nanokana fotoana tamin'ny asany be atao mba hitsidihana an'i Cepai. Ary nilaza ihany koa izy fa ny CEPAI dia hanao ezaka bebe kokoa amin'ny kalitaon'ny vokatra sy ny fotoana fandefasana mba hahafeno ny fepetra takian'ny Stream Flo Company.